sheeko xikmad leh - Hoyga Aqoonta
Waxaa la qoray : [ 18-11-2011 ]
waan idin salaamay dhamaan akhristayaasha hoyga aqoonta, bal maanta aan idiinka sheekeeyo sheeko xikmad leh oo aabahay iiga sheekeeyey berigaan dugsiga sare dhiganayey.
wuxuu yidhi aabahay aniga oo kitaab marsanaya oo sheekh uu noo akhrinayo, baa sheekhii qisadan soo socta noo soo dhex galiyay( sheeko ahaan si aanan u daalin oo casharka aanan ug acaajisin),
Waa tanaa sheekadii :
Nin(waxaan filayaah in uu iigu sheegay nabi inuu ahaa ka mid ah nabiyadii hore mase hubo) ayaa wuxuu u yeeray nin kale oo wuxuu ku yidhi jihadaa(intuu meel u tilmaamay) aad oo lix (6) saac soco, ka dibna soo noqo oo waxaad soo aragto ii soo sheeg.
Ninkii sida la amray buu sameeyey oo jihadii loo diray buu u socdaalay, wixii ugu horreeyey ee uu arko waxay asagoo maraya afka hore ee wadiiqad(waddo) u dhaxaysa laba buurood ayaa wuxuu ku arkay wax yar oo dhalaalaya oo wadada dhex yaalla, wixii buu usha saas ugu dhuftay, bug! qarax baa dhacay labadii buurood baa is qabsaday isla markii uu usha ugu dhuftayba! dhinaca ayuu ka wareegay oo socodkiisii sii watay, dabadeed wuxuu arkay guri qurux badan, gurigii ayuu albaabkiisii furay mase ur buuba dareemay sidaas uu u fiiriyay waxa gudaha ka soo urayana wuxuu arkay in saxaro ka buuxdo wuu isa soo xidhay socodkii ayuuna sii watay.
Wali lixdii saac ma dhammaan sidaa awgeedna socodkii ayuu sii watay, dhacdadii saddexaad ee uu la kulmana waxay ahayd inuu arkay rati gaajo la soo gotay oo dhex taagan dhul Ilaahay doog iyo barqaaqo ku mannaystay balse aanan cunayn naqa iyo doogga baxay.
Wuu ka sii socday oo misna wuxuu la kulmay rati kale oo fadhiya oo ay calooshiisii iyo qaybaha jirkiisa ay iska daldalanayaan weer, dawaco, dhurwaa, abkay bahaloo dhan danse aan ka lahayn ee iska daaqaya oo naqa iska raamsanaya!
Wuu iska sii socdayoo ugu dambayntii wuxuu la kulmay gabar qurxoon oo gadaal gadaal u sii ordaysa, gabadhii buu daba orday saa way ka sii cararaysaa wuu gaadhi kari waayay, wakhtigii baa dhamaaday lixda saac ahaa kolkaasuu iska soo laabtay.
wuxuu u yimid ninkii markii hore diray wuxuuna u sheegay waxyaalihii uu soo arkay oo dhan, dabadeed wuxuu ugu jawaabey hadaba waan kuu fasiri waxaad soo aragtay ee i dhagayso:
1. wixii dhalaalayay ee aad usha ku dhuafatay ee isla qarxayoo labadii buurood is qabsadeen waa FITNO, fitnadu marka hore way huruddaa markiise la toosiyo dhib wayn baa yimaada iyo khasaaro wayn. tusaale aan ku darsado anigu (xassan ahaan) nin ayaa nin dilaya, hadaba ninkaas kali ah ee dhintay ayadoo si sharciga islaamka waafaqsan looga heshiin karo baa mararka qaarkood inta fitnadaas yar la huriyo ay dhashaa in 100 nin oo kale ay ku dhintaan.
2. gurigii quruxda badnaa ee aad la kulantay gudahana saxaradu ka buuxday waa TAARIKU SALAAD ama qof salaadii ka tagay oo ma tukade ah, waayo qofka aan tukani korka labis buu xidhanyahay, jirka waa qurxinayaa oo dushiisa wuu qurxin karayaa balse qalbiga waxaa ka buuxa saxaro, waayo waa qalbi aan Alle xusin u sujuudin oo aan xasuusan.
3.Ratigii kaynta barwaaqada ah taagnaa kase qatanaa waa BUKHAYL ama dhabcaal, waayo bukhaylku xoolihiisa cidna wax kama siiyo asna kuma baahi baxo, oo wuu ka qatan yahay waana arrin dhibteeda leh .
4. Ratigii xubnihiisa la iska cunayay ee aan danta ka lahayna waa DEEQSI, deeqsi xoolihiisa dadkoo dhan baa cuna dhibna uma arko naftiisana ugama bakhaylo, dadkana ugama bakhaylo.
5. gabadhii gadaal gadaal u cararaysay, waa ADDUUNYO adduunyo waligaa daba orod gaari maysid.
F.G sheekadaan wakhti ka hor baa la iiga sheekeeyey waan qoray balse note buugii waa iga lumay, haddii aan wax khalday ha la isaxo, hadii aan saxsanahayna dulucdeeda hala dhuuxo.
Mowduucii hore : sheeko xikmad leh -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Hassan hashi
Jawaabta: sheeko xikmad leh
Waxaa la qoray : [ 19-11-2011 ]
sheekadaan wakhti ka hor baa la iiga sheekeeyey waan qoray balse note buugii waa iga lumay, haddii aan wax khalday ha la isaxo, hadii aan saxsanahayna dulucdeeda hala dhuuxo
Runtii abwaan inaad intaa tiraahdo ma'ahayn oo ah dulucdeda ha la dhuuxo balse waxay ahayd inaad codsato mahadnaqu inuu bato oo sheekadan oo kale waa mid ku habboon in la kaydiyo waanan kaaga mahad celin
Dhowr xikmadood oo hal sheeko ah maashaa'allaah abwaan waan kaaga mahad celin
Waa sheeko xikmad leh ku mahadsanid abwaan
waalaga faa,iidaysan abwaan sheekadan wanaagsan mahadsanid
Runtii abwaan xikmad ma'aadan hambayn sheeko lagu sheego aad iyo aad baan kaaga mahad celin sheekadan ka badanna waannu sugaynaa
Nambarka Xubinka : 188
ka qayb galka : 74
Waxaa la qoray : [ 20-11-2011 ]
waxan layaabanahay sida aan sheekadan loo qiimayn bal iga hano qiimaynta ugu fiican ileen waa sheeko fiicane mahadsanid abwaan 5 xiddigood hoo
Warqad gaara u dir guulayste
Raadi qoraalladuu qoray/qortay guulayste
waad kumahadsantahay abwaan waa sheeko macno weynku fadhida.
abwaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa xikmad 'waano' wacdi ' iyo cibro intaba masha allaah mahadsanid 10 xidigood baan ku qiimeeyey !!
waan kahelay mahadsanid
adduunyo, akhristayaasha, cararaysay, gabadhii, gadaal, hoyga, waa
xaajo iyo xaal xikmad biitey Gabayada 10 22-01-2012 04:13 PM
sheeko qosol leh (kheer waaye) Maxammed Xamza Sheekooyinka 3 02-11-2011 07:14 AM